Ngwaahịa a na-chepụtara iji otu nzọụkwụ, mgbaze-free usoro, na a na-nyere dị ka ma mmiri nkwusioru ma ọ bụ a lyophilized ntụ ntụ, nke nwere ike ngwa ngwa re-etisasịwo mmiri n'ihu were.
Alternative aha: Silk fibroin nanoparticles / microparticles
Silk fibroin protein dabeere micro- na nanospheres enye ọhụrụ nhọrọ maka ọgwụ nnyefe na ndị ọzọ ngwa ruru ha biocompatibility, biodegradability na tunable ọgwụ loading ma hapụ Njirimara, karịsịa maka protein / peptide ọgwụ ọjọọ na mmiri-unyi anaghị agbasa na ọgwụ ọjọọ. The elu encapsulation arụmọrụ na controllable ọgwụ ntọhapụ kinetics nwere ike nweta site na akara nke crystalline beta-mpempe akwụkwọ ọdịnaya silk ihe.
Anyị proprietary silk nano / microspheres na-chepụtara iji otu nzọụkwụ, mgbaze-free usoro, na-nyere dị ka ma mmiri nkwusioru ma ọ bụ a lyophilized ntụ ntụ, nke nwere ike ngwa ngwa re-etisasịwo mmiri n'ihu were.
Oke na Njirimara
Size nke nanosphere: nwere ike iche na a nso nke 100-1000 nanometers;
Size nke microsphere: nwere ike iche na a nso nke 1-100 micrometers
Ọgụgụ 1 EM nke silk fibroin nanosphere (500 nm) Ọgụgụ 2 EM nke silk fibroin microsphere (2-3 μm)
Ngwaahịa a bụ a ahaziri ngwaahịa. Anyị nwere ike inye usoro nke nanospheres ma ọ bụ microspheres na na-enweghị ọgwụ loading dị ka gị na-arịọ.